जनयुद्धको पहिलो महिला छापामारदेखि सदनको प्रमुख महिला सम्मको यात्रामा– ओनसरी « Light Nepal
जनयुद्धको पहिलो महिला छापामारदेखि सदनको प्रमुख महिला सम्मको यात्रामा– ओनसरी
Published On :6March, 2018 3:35 pm
काठमाण्डौ २१ फाल्गुन । जनयुद्धको पहिलो महिला छापामार एवं सदनकै पहिलो महिला प्रमुख तर निर्वतमान सभामुखसंगको पहिलो भेट । त्यही भेटमा नै मैले आँटेको पहिलो अन्तरवार्ता । त्यो पनि पहिलो नै थियो । मुलधारमा सञ्चालित मिडिया नभएर नै होला उनी सभामुख हुँदा नै आँटेको अन्तरवार्ता अधुरै रहेको थियो ।
आजको उनीसंगको यो भलाकुसारीलाई मैले मिडियाको पहुँच र मुलधारमा बसेर पत्रकारीता गरेकै भरमा सम्भव भएको भन्ने ठानेको छु ।
यस पालिको उनीसंगको यो भेट पनि पर्खाई पछिको सफलता भएको भन्दा अतियुक्त नहोला । उनीसंगको यो भेटलाई पार्टी एकताको प्रकृयाको अर्को सरल र सहज समन्वय नै भन्दा पनि खासै फरक नपर्ला ।
हुन त पत्रकारले सबै नेताहरुसंग बहस र अन्तरवार्ता गर्नै पर्ने हुन्छ । तर पत्रकारीता गरेको निकै लामो समय बितिसक्दा पनि मैले मोओबादी निकट नेताहरुसंग कहिल्यै यसरी भलाकुसारी गर्ने मौका पाएको थिएन । तर यतिबेला भने ओनसरीसंगको यो भेट सहजै हुनुमा पार्टी एकताको विषय पनि कारण हो भनेर मज्जैले भन्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।
भेटनलाई घरमै गएर कुराकानी गर्ने अनुमति पाईसक्दा पनि उनलाई झण्डै एक हप्ताको पेरिफेरिमा भेटें मैले । सोमाबारको दिन । महिला फाल्गुनको भएकोले होला काठमाण्डौको मौसममा घामै प्यारो । तराईतिर गर्मी र मच्छरले रिंगाउन शुरु गरिसकेको भन्ने समाचार प्रतिदिन सुन्न परिरहेको बेला काठमाण्डौको घामको मज्जा लिंदै ओनसरीलाई पौने घण्टा कुरेको पत्तै भएन ।
मसंगै गएको क्यामेरा पर्सन दिदी आफ्नै सुरमा फोनमा कसैसंग कुरा गर्दै थिईन् । मलाई भने घामै प्यारो । झण्डै पौने घण्टा जति कुर्नु पर्दापनि घामको तातोले दिएको आनन्दमा ओनसरीलाई कुर्नु कुनै छटपटिको महसुस नै भएन । जबकी पर्खनु जस्तो दिक्क लाग्दो काम मेरालागि जीवनमा अरु केही हुनै सक्दैन ।
मैले समयको सदुपयोग गरें । उनको विगतदेखिको संघर्षलाई पुनहः एकपटक अध्ययन गर्न भ्याएँ । वि.सं. २०५२ सालदेखि भुमिगत भएर लडाकु भएकी ओनसरी रोल्पाको जंकाट गाविस माडिचौरको एक विकट गाउँको साधारण किसान परिवारमा जन्मिएकी महिला हुन् । वि.सं. २०३४ साल कार्तिक २८ गते जन्मिएकी ओनसरी संसारकै सम्मानित महिलाहरुको सूचिमा पर्दछिन् ।
दुर्गमन गाउँमा जन्मिएरपनि बालापन देखि नै अरुको तुलनामा केही फरक सोंचले हुर्कदैं बढेकी ओनसरी वि.सं. २०७० सालको संविधान सभाको निर्वाचन पछि मुलुककै पाँच ओटा सर्वोच्च पद मध्य एउटा रहेर काम गरिसकेकी राजनीतिमा पोक्त महिलाको रुपमा चिनिन्छिन् ।
सामान्य जीवनयापन, फरक तर विशिष्ट सोंचाई, परम्पराको नाममा आम मानिस र विशेषगरि महिलाले सहनु पर्ने थिचोमिचोको विरोध त्यो दुरदराजमा बसेर गरिरहंदा उनको के हाल भएको थियो होला त्यो जोकोहीले सजिलै अनुमान गर्न सक्ने विषय भने पक्कै होईन । यदि हुन्थ्यो भने उनको सोचाईलागि समर्थन गरिनुको साटो उनको विरोधमा चर्को आवाज उठ्दैनथ्यो होला ।
जस्ले जे भनेनी उनको आवाज उत्पीडनमा परेका र पछाडी पारिएकाहरु विशेषगरि महिलाहरुकालागि भएकाले हुनसक्छ दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा पार्टीका ठुला र स्थापित नेताहरुले हार बेहोरिरहंदा ओनसरी भने रोल्पा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचन जित्ने एक्लिी महिला नेतृ थिईन् । मैले सम्झिएँ, त्यसबेलाको जितले नै ओनसरीलाई सिंहदरबारमा प्रवेश गर्ने ढोका खोलिदिएको हो ।
समय र परिस्थितिले औपचारिक शिक्षामा धेरै ज्ञान बटुल्न नसकेकी ओनसरीले जीवनसंगै जोडिएको राजनीतिको ज्ञान भने मज्जैले बटुलेकि छिन् । लडाकु भएर पनि सालिन र सभ्य तरिकाले प्रस्तुति दिन सक्ने क्षमता भएकी ओनसरी आफैमा साहासी र आँटिली महिला हुन् ।
सभामुख हुनु पुर्व घर्ती उपसभामुख थिईन् । उनले आफुले पाएको उपसभामुखको जिम्मेवारी पनि कुशलता पुर्ण तरिकाले नै पुरा गरेकी थिईन् ।
केन्द्रिय प्रणालीमा लामो समयदेखि सञ्चालित नेपालको राजनीतिले कोल्टे फेरेको छ । स्थानिय, प्रदेश हुँदै संघको निर्वाचन सम्मपन्न भए लगत्तै नेपालको राजनीति केन्द्रिय प्रणालीबाट टुक्रिएको छ । सम्बृद्ध नेपालको सपना बोकेका नेता र सपना देखेका नेपाली जनताले सोंचे जस्तै नेपालको राजनीतिको धार निमार्ण भएको छ ।
सोही अनुरुप राज्यको पुनरसंरचना हुँदै गर्दाको अवस्थामा ओनसरी घर्ती मगर निवर्तमान सभामुख भएकी छन् । घर्ती २०७४ को प्रतिनीधि सभाको निवार्चनबाट समानुपातिक तर्फको संघिय संसदको सदस्य भएकी छन् । अब उनको राजनीतिक यात्रा कता तिर मोडिएला भनेर सोंच्दै थिएँ । त्यत्तिकैमा उनका एक सहयोगी आएर भित्र आउनुस् भन्दै हामीलाई गेष्ट रुमतिर लगे । जब गेष्ट रुममा पुग्यौं तब ओनसरी र उनका श्रीमान अनन्त हामी भन्दा पहिले नै पुगि सकेका रहेछन् ।
धेरै समय कुर्नु परेको हुनाले हामीले अनौंपचारिक कुराकानीमा धेरै समय खेरा फालेनौं । कार्यक्रमको बारेमा ओनसरीलाई पुर्व जानकारी गराईसकेको हुनाले लाईट नेपालको लाईट टकमा औपचारिक कुराकानीको शुरुवात भयो । जनयुद्धदेखि सदनसम्मको यात्रामा पहिलो महिलाको रुपमा आफ्नो अनुभवको संगालो सुनाउन उनी यसरी प्रस्तुत भईन् । भिडियो सहित